Sina Mango, mananasy, papay, milina fanodinana zanava ary orinasa mpamokatra | Hanketo
Mango, mananasy, papay, milina fanodinana zanava ary tsipika famokarana
Mangaha, mananasy, papayy, milina fanodinana zanava ary tsipika famokarana dia mety amin'ny fanodinana voankazo tropikaly toy ny manga, mananasy, papay, goaka ary sns.
Izy io dia afaka mamokatra ranom-boankazo mazava, ranom-boankazo, ranom-boankazo, vovoka, voankazo. Ity tsipika ity dia misy milina fanadiovana bubble, hoist, masinina fifantina, milina fanadiovana borosy, milina fanapahana, milina mialoha, peeling sy denudation machine, crusher, belt juicer, Separator, fitaovana fifantohana, sterilizer ary milina famenoana, sns. foto-kevitra mandroso sy avo lenta ny mandeha ho azy; Ny fitaovana lehibe indrindra dia vita amin'ny vy tsy misy fangarony avo lenta, izay mahafeno tanteraka ny fepetra takiana amin'ny fahadiovana amin'ny fikarakarana sakafo. Ity famolavolana tsipika famokarana ity dia mandroso, avo lenta amin'ny automatisation; Ny fitaovana lehibe indrindra dia vita amin'ny vy tsy misy fangarony avo lenta, izay mahafeno tanteraka ny fepetra takiana amin'ny fahadiovana amin'ny fikarakarana sakafo.
Mango, mananasy, papaya, milina fanodinana zanava ary tsipika famokarana dia misy: ascenseur, fantsom-boasary, mpanondrana visy, milina fanadiovana miboiboika, milina fanadiovana amponga, milina fanadiovana borosy, milina fanaraha-maso voankazo, crusher hammer, crusher cage squirrel, juici scèru, fehikibo juicer, lovia juice, press kitapo, masinina fikolokoloana, remover masomboly, remover fototra, pulpitra tokana / roa, milina fangotrahana mialoha, inactivator anzima, juicer fantsom-boaloboka, ranom-boaloboka, tsindry kitapo, milina peeling, remover voa, remover fototra, milina tokana / indroa mandalo, milina mialoha ny nandrahoana, milina famonoana anzima, sns Preheater, milina mikorisa, Dicer, vilany fandrendrehana siramamy, fitoeram-bokatra, tanky enzimmazy, fantsom-panafody, tanky mifangaro, fangaro fampifangaroana, evaporator effet roa sosona / vilany fanjifana , vilany fanamafisana mihodina ivelany, fisintahana centrifugal disc, rafitra adsorption ultrafiltration, homogenizer, degasser, milina fanamafisam-peo UHT (hafanana be eo noho eo) milina fanasan-tavoahangy, boaty fanalefahana, masinina famehezana, milina fameno telo ao anaty, mandraraka sterilizer tavoahangy, sterilizer tionelina, sterilizer fandroana rano, sterilizer, fanamainana fandroana rivotra, milina fanoratana marika, milina fanefitra kaody, rafitra rano madio osmosis, rafitra CIP, karazan-tsakafo sterilizer, sterilizer casing, masinina fameno kitapo lohan-doha, mpanasaraka disc centrifugal ary press press filter plate.
* Fahaiza-manao fanodinana manomboka amin'ny 3 taonina / isan'andro ka hatramin'ny 1500 taonina / andro voankazo vaovao.
* Afaka manodina voankazo misy toetra mampiavaka azy, toy ny manga, mananasy sns.
* Azo diovina amin'ny alàlan'ny famonoana volo sy fandroana multistage
* Ny juice fehikibo dia afaka mampiakatra ny tahan'ny fitrandrahana ranona mananasy
* Milina peeling, denudation ary pulping mba hamitana ny fanangonana ranom-boankazo
* Fihenan'ny banga amin'ny hafanana ambany, hiantohana ny tsiro sy ny otrikaina ary hitsitsy angovo.
* Fanamorana sterilization sy famenoana aseptika mba hiantohana ny toetran'ny aseptika amin'ny vokatra.
* Miaraka amin'ny rafitra fanadiovana CIP mandeha ho azy.
* Ny rafitry ny rafitra dia vita amin'ny vy vy 304, izay mahafeno tanteraka ny fepetra takiana amin'ny fahadiovana sy ny fiarovana ara-tsakafo.
Mango, mananasy, papay, milina fanodinana zakava ary fonosana famokarana: tavoahangy fitaratra, tavoahangy plastika PET, fantsom-bokotra, fonosana malefaka aseptika, baoritra biriky, baoritra ambony azo zahana, kitapo aseptika 2L-220L amin'ny amponga, fonosana baoritra, kitapo plastika , Kapoaka tinetika 70-4500g.
Previous: Volomboara voasary, citrus, grapefruit, milina fanodinana voasarimakirana ary tsipika famokarana
Manaraka: Blueberry, blackberry, mulberry, frezy, raspberry, bayberry mena, milina fanodinana cranberry ary tsipika famokarana
Blueberry, blackberry, mulberry, frezy, ra ...